China inotapira uye yakasviba Spare Ribs fekitori uye vagadziri | Huikang
Yakanaka uye Sour Spare Ribs (Yakanaka uye Sour Spare Ribs) inomiririra yechinyakare dhishi ine inotapira uye yakasviba kuravira. Inoshandisa mbabvu nyowani nyowani sechinhu chikuru, nyama iri nyowani uye nyoro, uye ruvara rweyakapedzwa ndiro tsvuku uye inopenya.
"Inotapira uye inovava" inonaka iyo ine ese makuru maChinese chikafu ane. Iyo inotapira uye inovava nyama yenguruve mbabvu yakatanga muZhejiang uye yakajairika Zhejiang dhishi.
Iyo chaiyo inotapira uye yakasviba nyama yenguruve mbabvu yakanyanya kunyanya nezve nzira uye zvigadzirwa. Kazhinji, mbabvu nembabvu zvinoshandiswa. Iyo mbabvu yenguruve inoda kubviswa kubva muropa, yakadururwa uye yakashambidzwa kunhuhwirira, ndokuzoputirwa neupfu uye yakadzika-yakabikwa kusvika pamusoro pegoridhe uye crispy. Tora kuti ushandise gare gare. Mushure mekunge ruvara rwehuga rwawanikwa, mbabvu dzakakangwa mupani, uye pakupedzisira dzakaputirwa nemupunga wevhiniga kuti ive inotapira uye yakasviba kuravira. Rice vhiniga rinofanira kushandiswa pano. Iko kuravira kwekare vhiniga kwakanyanya kusimba uye kunokanganisa kuravira!
Izvo zvinoshandiswa zvinoshandiswa muShanghai chikafu zvinongonaka uye zvinovava. Tomato muto unoshandiswa mukuravira. Izvi ndizvo zvakare hunhu hweShanghai chikafu. Zhejiang cuisine yakapfuma muzvinhu, zvinonaka, uye izere neruvara, kunhuwirira uye kuravira. Sichuan cuisine ndiyo yakanyanya kunaka sarudzo inotapira uye yakasviba yenguruve mbabvu. Pair neshuga, munyu uye vhiniga.
Iyo muto weinotapira uye yakasviba yenguruve mbabvu inongova chete Shanghai ndiro nedomasi muto. Shanghai ndiro ine kuravira kwakareruka, nepo Zhejiang ndiro uye Sichuan ndiro dzakanyanya kukosha. Iyo inotapira uye yakasviba yenguruve mbabvu dzeShanghai chikafu uye Zhejiang chikafu chikafu chakabikwa, nepo inotapira uye yakasviba nyama yenguruve mbichana muSichuan chikafu chiri chinozivikanwa inozivikanwa chando dhishi muSichuan. Inoshandisa nzira yakadzika-yakabikwa yekubika. Iyo ndeyeye inotapira uye yakasviba kuravira, ine amber oiri, yakaoma kunhuwirira uye kunyorovesa. Iyo yakasviba uye yakapfava, inoyevedza yakanaka kana inofadza. Anonyanya kudiwa nevanhu veChinese.
Huaiyang cuisine inotapira uye yakasviba yenguruve mbabvu inosanganisa hunhu hweZhejiang chikafu uye Sichuan chikafu mune hunyanzvi, uye inosanganisa hunhu hweShanghai chikafu mukuravira. Iyo yakarungwa inotapira uye inovava, hanyanisi negariki, uye inomhanyisa-yakakangwa nemafuta. Nhoroondo yeinotapira uye yakasviba nyama yenguruve mbabvu dzakagadzirwa muHuaiyang chikafu Shorter pane mamwe matatu ma kicheni.
Pashure: Chongqing Spicy huku
Zvadaro: Kung Pao Chicken
Frozen Chikafu Vanogovera